Impazamo ebulalayo ivela kwi-Ubuntu 17.04 kunye ne-16.10 yokungena kwesikrini | Ubunlog
Kule mihla siye seva konke malunga ne-WannaCry virus okanye i -hlengware, i-malware ebeke wonke umntu kunye neenkampani zakhe. Ku-Ubuntu ayisiyongxaki okanye kubasebenzisi bayo, kodwa Ubuntu abuqhelekanga kwezi ntlobo zeengxaki kwaye kutshanje ubonakalise ingxaki yezokhuseleko.
Le ngxaki inkulu ivumela nawuphina umntu ngendlela ebonakalayo angangena kwiiseshoni zabucala kwaye ke ukufikelela kwiifayile zabucala kunye nezixhobo zekhompyuter.
Ngethamsanqa le bug kwi-LightDM sele ilungisiwe kunye nohlaziyo lwamva nje luya kusivumela ukuba sikhuseleke kwaye sikhuselwe kwakhona. Into enomdla kukuba, le bug ichaphazela kuphela iinguqulelo eziyi-16.10 kunye ne-17.04, iinguqulelo ezikwe-systemd. Kwaye kubonakala ngathi ezinye zeephakeji ezisetyenzisiweyo kolu tshintsho kwisistim ngoyena nobangela walo mngxunya wokhuseleko.
Ukongeza, ingxaki ayisiyongxaki njengakwezinye iinkqubo zokusebenza kuba umsebenzisi kufuneka abekho phambi kwekhompyuter ukuze akwazi ukwenza lo mkhwa, Oko kukuthi, Ukuphathwa gadalala kude kwezokhuseleko akunakwenzeka.
Uhlaziyo olulungisa le bug lusasazwa okwangoku, kodwa ukuba awukayifumani okwangoku okanye awufuni kuyifaka kodwa ufuna ukufikelela kubasebenzisi beendwendwe kwakhona, Kuya kufuneka uhlele ifayile yoqwalaselo lwe-LightDM. Ke sivula i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Kwaye sibhala oku kulandelayo:
Sigcina ifayile kwaye siqale ikhompyuter ukuze utshintsho luqale ukusebenza. Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo zokusebenza, Ubuntu kunye noluntu lwayo lwenza Inkqubo yokusebenza iluncedo kwaye ikhuselekile kuwo wonke umntu kwaye kuyo nayiphi na ingxaki, iya kulungiswa ngokukhawuleza ngokuhlaziya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Impazamo ebulalayo ivela kwi-Ubuntu 17.04 kunye ne-16.10 yokungena kwesikrini
UNicolas gonzalez sitsho
Iimpazamo ezahlukeneyo ndizifumene
Phendula kuNicolas Gonzalez
Uhlaziyo luyothusa haha
Ndiyaqhubeka nohlobo lwe-16.04 kwaye andinangxaki, ke ukuba andikukhuthazi ukuhlaziya i-kernel kuhlobo olutsha, ine-bug encinci yemizobo
Ukusukela ngoko ukuya phambili, kubonakala kuzinzile kum kwaye ngokuqinisekileyo awuyi kuhlaziya kude kube kuphuma uhlobo kunye ne-genome kunye nendlela eziphatha ngayo
UJenrry Soto Dextre sitsho
Kulungile nje ngosuku olulandelayo bathumele i-patch kwaye balungisa uhlaziyo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokulibaziseka, nangona ndingazange ndibenazo naziphi na iimpazamo kodwa hey ayikhe ibabuhlungu. ngokubhekisele
Phendula uJenrry Soto Dextre
Ayisiyonto ililize kodwa i-16.04 ikwanayo ne-systemd, i-14.04 yeyona ingekhoyo.
Kwi-debian8 izolo ndihlaziye "ukungena" kunye "nokudlula", ndicinga ukuba le bug iyichaphazele.
Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) ifumana indawo yokuqala yokhuseleko kwiKernel yayo